ट्राफिक प्रहरीले अब ३५ प्रतिशतसम्म भत्ता पाउने - Everest Dainik - News from Nepal
ट्राफिक प्रहरीले अब ३५ प्रतिशतसम्म भत्ता पाउने
काठमाडौं, फागुन २७ । ट्राफिक प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले अतिरिक्त भत्ताको प्रस्ताव गरेको छ । सडकमा दैनिक १५ घन्टासम्म खटिने उनीहरूलाई ३५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ताको प्रस्ताव अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहले भत्तासम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । गृहको प्रस्तावअनुसार डिएसपीसम्मका प्रहरीले प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । डिएसपीलाई बेसिक तलबको १० प्रतिशत, इन्स्पेक्टरलाई २०, सइ, असइलाई २५ तथा हवल्दार, सिपाही र कार्यालय सहयोगीलाई ३५ प्रतिशत भत्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस काम नभए पनि बसीबसी भत्ता पाइने !
सरकारले हालै विभिन्न निकायलाई शतप्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरिसकेको छ । विगतमा ट्राफिक प्रहरीले पनि भत्ता पाउने र भत्ताका कारण जथाभावी कारबाही गरेको विवाद आएपछि साउनदेखि कटौती गरिएको थियो । माघ महिनादेखि फेरि भत्ता दिन थालिएको थियो । तर, त्यसमा ट्राफिक प्रहरीलाई समेटिएको छैन । कार्यालयमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीलाई शतप्रतिशतसम्म भत्ता दिइएपछि ट्राफिक प्रहरीलाई भने थोरै भत्ता दिनसमेत कन्जुस्याइँ भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
याे पनि पढ्नुस प्रमुखदेखि भान्छेसमेत एकैपटक सरुवा !
ट्याग्स: trafic, Vatta